5 Sababood oo Md. Farmaajo u Baajiyey Safar uu Ku Tegi lahaa Qatar iyo Culayska Siyaasaddeed ee Haysta |
5 Sababood oo Md. Farmaajo u Baajiyey Safar uu Ku Tegi lahaa Qatar iyo Culayska Siyaasaddeed ee Haysta
2 Arrimood oo ku khasbay Madaxweyne Farmaajo inuu ka cararro Madaxtooyada iyo Sababta uu u baajiyey safarkiisa..?
Ma ka badbaadi doonaa inay sahaydaan xiisada diblomaasiyaddeed ee Carabta iyo Mucaaridka gudaha?
Imisa qorshe ayuu ku fashilmay sannad kaddib…?Warbixin GNA
Madaxweynaha Dawladda Nabad-gelyaddeeda la ilaaliyo ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo
Muqdisho(GNA)-Is-qab-qabsiga u dhexeeya Baarlamanka iyo dawladda uu madaxda ka yahay, ayaa la sheegay inuu sabab u yahay safar uu Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku tegi lahaa dalka Qatar oo baaqday.
Waxa kale oo jira dareen laga qabo in madaxweyne Farmaajo u baajiyey socdaalkiisa shaki soo kala dhex galay Dawladdiisa iyo Qatar, kaasoo salka ku haya inay Dawladdiisu daacad ka tahay Mowqifka ay ka qaadatay Shirkadda DP World.
Dawladda Qatar, ayaa si gaar ah loogu xidhiidhinayaa inay ku lug lahayd go’aanka Dawladda Farmaajo kaga soo horjeedo Heshiisyada Maal-gashi ee ay Shirkadda DP World la gashay Jamhuuriyada Somaliland iyo Dalka Ethiopia, kaasoo ah heshiis saddex geesooda oo lagu maal-gelinayo Dekedda Berbera.
Safarka Madaxweynaha ayaa baaqday saacadihii u dambeeyey ee qabanqaabadiisa, waxaana mar qudha lagu war helay inuu joojiyey socdaalkiisa.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha oo ku sababta rasmigaa ee uu uga baaqday Safarkaas.
2 arrimood oo ku khasbay in Madaxweyne Farmaajo uu ka cararro Madaxtooyada
Hase ahaatee illo-wareedyo ku dhadhow ayaa laga soo xigtay in arrinta ugu muhiimsan ee uu socdaalka u baajiyey ay tahay xiisada ka dhex aloosan Golaha Shacabka iyo Xukuumadda Reysal wasaare Khayre oo uu culays badan oo siyaasaddeed, cabsi nabad-gelyo iyo cadaadis caalamiya uu kala kulmay.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa tan iyo markii khilaafka Aqalka hoose ee Baarlamanku uu istaadhmay todobaadkii hore ka maqnaa hoygii uu ka degenaa Madaxtooyada, waxaanu u guuray xarunta Wasaaradda Gaashaan-dhiga ee Magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ka dhigtay hoy, howl-maalmeedkiisa shaqo-na uu ku qabsado.
Dhanka kale, waxa uu isla maanta markii uu baajiyey safarkiisa ku dhawaaqay howl-gal lagula dagaalamayo Alshabaab, kaasoo ay Warbaahinta u sharaxeen xubno kamida Golaha Shacabka iyo Xukuumaddu.
‘’Howlgalkan wuxuu noqonayaa mid ka duwan kuwii hore, waayo waxaa hor kici doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo’’ayuu yidhi Wasiirka Wasaaradda Gaashaan-dhiga Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
Ma ka badbaadi doontaa Dawladda Farmaajo Manjo xaabin diblomaasiyaddeed iyo Mucaaridka gudaha?
Si kastaba ha ahaatee Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo sanad xilka hayey, ayaa waxa uu waajahayaa caqabado fara badan oo bilow ag iyo kuwo uu hore ula daalaaca-dhacayey oo iminka dib u cusboonaaday.
Waxa kamida dagaal diblomaasiyaddeed oo dhinaca Carabta kala soo dersa iyo Mucaaridad xooggan oo gudaha dalka kaga kacda. Labadaa arrimood oo soo dedejinaysa inuu ku fashilmo hogaaminta dalka.
Dadka sida dhow ula socda Siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan inay dawladda madaxweyne Farmaajo u sii xuub-siibanayso inaanay waxba kaga duwanaan kuwii ka horeeyey oo ay fashilanto, taanna waxa sabab u ah inaanu muddo sanad ah waxba iska bedelin amaanka Caasimada Muqdisho “ wali Dawladda waxay xukuntaa waddada Maka al mukarama, rejjo dhow oo muqataana ma jirto” ayuu tilmaamay Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlayey dood ay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-du qabatay Jimcihii oo lagu lafo-guray xaalada cakiran ee Muqdisho.
Imaaraadka Carabta oo si togan iyo si tabanba saameyn ugu leh Muqdisho ayey dawladdiisu lumisay ugu yaraan qayb kamida xidhiidhkii saalloonaa ee ka dhexeeyey, waxaanay jawaabta kaga soo noqotay lagu tilmaami karaa inay Imaaraadku aaminsan yihiin “ Dameer aan dushiisa saaranahay Neeftiisu maxay I yeelli”, taasoo ka dhigan inaanay dawladdiisu diidmada Heshiiska Berbera wax kaga xumaada mooyaane waxba aanay ka faa’idi doonin.
Sanad kaddib arrimaha uu ku fashilmay Madaxweyne Farmaajo
Arrimaha ay durba guul-darradoodu muuqdaan waxa kamida Wadahadalladii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya oo inay rejjo ka soo dhawaato daaye dawladda Farmaajo ay ku tumatay masaaliixdii hore ay ugu heshiiyeen labada dhinac, taasoo keentay inay labada dhinacba ka durkaan jawigii lagu wadahadli lahaa.
“Nimankaa madaxda ka ah Xamar ee ay madaxtooyada ku ilaaliyaan Ajaanibku waxay iclaamiyeen dagaal ay ku soo qaadeen Somaliland, aniguna waxaan leenahay ku bushaaraysta dagaalkaa mid lamida” ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland oo todobaadkii hore ka hadlayey Xaflad ka dhacday Magaalada Hargeysa.
In ifafaalaha wadahadalladu sii fogaadaa waxay mar kastaba niyad jab ku tahay Muwaadiniinta u dhashay Somaliland ee Dawladda Xamar xilalka ka haya, kuwaasoo badankoodu naawilaya inay dhinac u dhacaan, si qorshahooda siyaasaddeed jeho u yeesho.
Waxa kale oo madmadow gelinayaa Mustaqbalka labada dhinac xidhiidhkoodu sidduu noqonayo iyo nabad-gelyada Gobolka, iyadoo dhanka kalena Shacbiga Somaliland ee mowqifka adag taagan lugooyo u dheerayn ku ah, inkasta oo aanay muuqan in taasi saameyn taban ay ku yeellanayso jiritaanka gooni-isutaaga Somaliland.
Si kastaba ha noqotee, xagal-daacyada hogaamineed ee iminka haysta iyo kuwa ifafaallahoodu muuqda ee ku soo wajahan Madaxweynaha Dawladda aan iskeed isu-maamulin ee Soomaaliya, ayaa waxay muujinayaan waji-gabax mar kale ku soo fool leh Shacbiga Soomaaliyeed, sida ay aaminsan yihiin falanqeeyayaasha Siyaasadda Gobolku, waxaana taasi hadday timaado wax laga saarayaa Madaxda Dawladda iyo daneeyayaasha dibada ee ku hirdamaya dalkan qoorta kala soo jeedda godkii uu ku dhacay 1991-kii.